Sida loogu beddelo saamaynta Siri kuwa JARVIS | Wararka IPhone
Ma rabtaa inaad dareento sida Ninka Birta ah? Waxaa laga yaabaa inaadan haysan lacag kugu filan, laakiin waxaad ka dhigi kartaa codka Siri inuu aad ugu eg yahay kan JARVIS, kaaliyaha gacan ku haynta ah ee maalqabeennada Stark Industries oo waqtigiisa firaaqada iska dhiga nin bir ah. Natiijadu ma fiicnaan doonto, laakiin taageerayaal badan oo majaajillo ah ayaa ku raaxeysan doona markay carruurt yihiin. Waxaa la joogaa waqtigii Siri caajisku ay codkeeda wax ka beddeli lahayd, oo tallaabo tallaabo ayaan kuu sheegi doonnaa sida ay tahay.
Casharradan wanaagsan ee sharafta leh ee Jeff Benjamin waxay naga caawin kartaa inaan isku dhex yaacno dhinac yar oo xishood ah oo ka mid ah iPhone-ka sida qaabeynta nooca noocan ah. Ugu horreyntii, ha ilaawin inaad sameyso nuqul saamaynta dhawaaqa Siri ah. (si fudud ugu kaydi daruurteenna adag) si iyaga lumintooda aysan noogu qasbeynin inaan dhammaystirno soo celinta qalabka.
2 Beddelida codka Siri
3 Hadda waa inaan u beddelnaa codka Siri oo loo beddelaa Ingiriis
Waxaan galnaa iFile
Waxaan raadineynaa wadada / Nidaamka / Maktabadda / Maqalka
Waxaan doorannaa UISounds
Waxaan keydineynaa feylka
Beddelida codka Siri
Marka hore waxaan kala soo dagi doonnaa saamaynta JARVIS dhawaaqa este isku xirka
Waxaan soo saareynaa feylasha
Waxaan riixnaa «Wax ka beddel»
Waxaan doorannaa shanta feylal
Guji badhanka «Kabadh»
Hadda waxaan gujineynaa «Goo»
Waxaan dib ugu laabaneynaa / System / Library / Audio
Dhagsii «Wax ka beddel»
Faylka ayaan ka dhejinnaa boodhka hoose
Dabcan waxaan ku xaqiijinay "overwrite all"
Waxaan dib u bilaabi doonaa iPhone (Kama qabanno Jawaab celin, laakiin waxaan dib u bilaabi doonaa Guri + Awood dheer)
Hadda waa inaan u beddelnaa codka Siri oo loo beddelaa Ingiriis
Waxaan fureynaa Settings> General
Waxaan galnaa Siri
Waxaan dooranaa «Luqadda»
Hadda waxaan dooranay markale «Ingiriisi (Boqortooyada Ingiriiska)
Haddii sababo jira awgood aad naftaada u lumisay tallaabo kasta oo aad qaadday fiidiyowga aan halkan kaaga tagayo ragga ka socda iDownloadBlog waxay noqon kartaa mid aad u sawiran.
Nasiib darrose, weli lama yaqaan inuu ku hadlo Isbaanishka, ugu yaraan ma aanan guuleysan, laakiin u fiirso dhinaca wanaagsan, waxay kaa caawin kartaa inaad horumariso Ingiriisigaaga (akhri birta). Dhibaatadu waxay tahay in Siri lafteeda aan lagu sifeynin dhalaalkeeda wax ka beddelkan ayaa u muuqda inuu xitaa ka yara gaabiyo, sidaa darteed anigu shaqsi ahaan iguguma talin wax ka baxsan xiisaha kaliya. Si kastaba ha noqotee, wax kasta oo diiradda saaraya sidii loo waafajin lahaa iPhone-ga waa war wanaagsan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » iPhone » Casharrada iyo buugaagta » Sida loogu beddelo saamaynta Siri kuwa JARVIS
Hadday ahaan lahayd af Isbaanish waxay noqon lahayd bakoorad! Laakiin Ingiriisiga ma fahmin .. Waxay la mid tahay sidii aan Siri ugu dhigay Ingiriisiga. Ka sokow tan waa in la is muujiyo dadka intiisa badanna waan aqaanaa waxay leeyihiin 0,0 Ingiriisi.
Jawaab Jerson Ortega
Christian Diaz naaaaaaa
Jawaab Eugenio Valenzuela
Diaz Christian dijo
Hada wow tweet
Ku jawaab Christian Diaz
Waa inuu ahaado xabsi la'aan
Jawaab Esteban Carvajal
Cristian Morales Bordonado, waxaa laga yaabaa inaad xiiseyneyso hahaha
Jawaab Juan Carlos Tururú
Ma lagu qori karaa Isbaanish ??
Jawaab Ivan Peralta
Maqaalku wuxuu leeyahay, hadda waxay umuuqataa inaysan ahayn. Laakiin hadaad rabto waad tijaabin kartaa oo noo sheeg. Dhamaan wanaag.
Diego Madiina dijo
Sideen dib ugu dhigaa Siri codkiisa?
Jawaab Diego Madiina
Sida loo dhoofiyo fiidiyowyada dhaqdhaqaaqa gaabiska ah ee iPhone 6 si aad ula wadaagi karto